Van de Beek oo lasiiyay talo uu ku badbaadin karo mustaqbalkiisa - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Van de Beek oo lasiiyay talo uu ku badbaadin karo mustaqbalkiisa
Ciyaaryahankii hore ee reer Holland Dirk Kuyt ayaa kula taliyay xiddiga kooxda Manchester United Donny van de Beek inuusan ka welwelin mustaqbalkiisa madaama bilowga adag ee noloshiisa maaliyada gaduudan ay sii socoto.
Van de Beek ayaa awoodi waayay inuu boos ka helo shaxda Red Devils tan iyo markii uu kaga soo biiray Ajax xagaagii hore.
Waxa uu saftay 13 kulan oo Premier League ah, iyadoo kaliya labo ka mid ah uu kusoo bilowday. Xaqiiqdii.
wuxuu arkay kaliya 313 daqiiqo inuu ku yeeshay kulamadii kooxdiisa ciyaartay xilli ciyaareedkan guud ahaan.
Iyadoo Bruno Fernandes loo arko inuu yahay ninka ugu weyn booskiisa, waxay la macno tahay in fursadaha uu heli karo xadidan yihiin 23 jirkaan.
dhaawac ama ganaax weyn oo la saaro Fernandes, kaliya ayuu fursad ku heli karaa inta uu ku sugan yahay Man Utd.
Sidaas darteed, waxaa horay u jiray hadal ah in laacibka reer Holland uu ka tagi karo kooxda suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Sidookale waxaa jiray dalabyo u yimid bishii Janaayo, laakiin United ayaa diiday inay amaah ku fasaxdo ciyaartooygaan.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku qanciyay van de Beek inuu iska sii joogo kooxda islamarkaana uu kamid yahay ciyaartoyda muhiimka ah ee kooxda.
Laakiin ciyaaryahankii hore ee Liverpool Kuyt ayaa u sheegay van de Beek inuu sii joogo Old Trafford, isagoo ku adkeysanaya inay wax walba u hagaagi doonaan isaga xilli dambe.
Kuyt, oo hadda hawlgab noqday, ayaa 208 kulan oo Premier League ah u saftay Reds ka dib markii uu kaga soo biiray Feyenoord 2006.
isagu wuxuu leeyahay habka ugu fiican ee uu kula qabsan karo England waa qodob ka mid ah kuwa caawin kara van de Beek.
“Tallaab laga soo qaaday Eredivise ee loo qaaday Premier League ma sahlana Premier League wuu ka adag yahay in badan Eredivisie,” ayuu u sheegay Sky Sports.
Waxaan aragnaa isla ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Chelsea Hakim Ziyech inuu dhibtoonayo, marka waxaan u baahanahay inaan siino ciyaartoyda waqti ay kula qabsadaan kooxahooda.
Previous articleMan United oo u soo bandhigtay € 150m xiddiga Barcelona Ansu Fati
Next articleBarcelona siday ugu dhawaatay Mbappe, sheeko xiiso leh